Milkiilaha Universaltv oo laga sii daayay xabsi ku yaala Magaalada Hargeysa – STAR FM SOMALIA
Milkiilaha Universaltv oo laga sii daayay xabsi ku yaala Magaalada Hargeysa
Milkiilaha Telefishinka Universal, Eng. Axmed Abuubakar, ayaa maanta laga sii daayay xabsi ku yaala Magaalada Hargeysa, ka dib markii la xiray gelinkii dambe ee Axadii shalay.
Milkiilaha Universaltv oo maalmahaanba booqasho ku joogay Magaalada Jigjiga, ayaa Hargeysa u yimid, sidii uu uga sii gudbi lahaa Magaalada Muqdisho, si uu uga qaybgelo caleemo saarka Madaxweynaha Somaliya, Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo).
Eng. Axmed Abuubakar, ayaa ka mid noqday marti sharafta la qorsheeyay in ay ka soo qaybgasho xafladda caleemo saarka Madaxweyne Maxamed C/laahi Maxamed, oo maalinta Arbacada lagu wado in ay ka qabsoomto Magaalada Muqdisho.
Ciidamada ammaanka Somaliland, ayaa si lama fillaan ah xabsiga ugu taxaabay Eng. Axmed Abuubakar, iyadoo aan la garanayn cidda bixisay amarka lagu soo xiray.
Dhinacyo kala duwan, ayaa gacan ka gaystay sii deysmada Axmed Abuubakar, waxaana duhurnimadii maanta la geeyay Hotel Mansoor, oo xilligan uu ku sugan yahay.
Xukuumadda Somaliland, ayaan weli ka hadlin waxa uu salka ku hayo xariga Milkiilaha Telefishinka afka Somaliga ku hadla ee Universal.
Askar ku geeriyootay qarax ka dhacay duleedka Magaalada Kismaayo
IMF oo sheegtay Somaliya inay ka caawinayso daabacaada lacag cusub oo Shilin Somali ah